Afọ 101 nke Kirk Douglas. Akwụkwọ ya na edemede ya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Afọ 101 nke Kirk Douglas. Akwụkwọ ya na ndị edemede ya
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Novela
Zutere ụnyaahụ 101 afọ (Disemba 9, 1916), nke ekwuru n’oge na-adịghị anya. Kirk Douglas, ma ọ bụ Issur Danielovitch Demsky, anọwo na ụwa kemgbe ihe karịrị otu narị afọ ma ọ dị ka ọ na-ezube ịga n'ihu obere oge. N'afọ gara aga, edeere m ya akwụkwọ Akụkọ a ma taa achọrọ m ịme ọzọ ka m laghachi azụ kọwaa ihu gị dịka onye edemede. Ọzọkwa Egwuru ụfọdụ ndị ama ama nke akwụkwọ Ma, dị ka ha, akụkọ ihe nkiri a ga-anwụ anwụ. Ka anyị gaa maka 102, Maazị Douglas. Ma ọ bụ maka onye ọ bụla ha bụ.
Ka anyị cheta na akụkụ Kirk Douglas nke onye edemede malitere mgbe ọ nọ 1988. Ọ dịworị afọ iri asaa na abụọ wee bipụta akwụkwọ ncheta mbụ ya n’okpuru aha Nwa nkpuru rụtụrụ aka n'ọfịs nna ya. Ma o metụtakwara ụdị nke akwụkwọ akụkọ ahụ na akwụkwọ ụmụaka.
1 Odide edemede
1.1 Ala nkịtị
2 Akwụkwọ dịka onye edemede
Ọ gaghị ekwe omume na e nwere ndị na-ekiri ihe nkiri na-ahụbeghị Njikọ 20 n'okpuru Osimiri o Spartacus. Ee ee, ọ nwere ike bụrụ na enwere ndị na - agụ akwụkwọ hụrụ naanị ihe nkiri ihe nkiri ndị a mana agụghị akwụkwọ ndị ahụ. Ọfọn, ị nwere ike ịme ma na fim Douglas dị egwu na-egwu ma odide.
Njikọ 20 n'okpuru Osimiri Ọ bụ ga-enwe akwụkwọ edemede nke oge niile. Ikekwe ọ bụkwa otu n'ime ndị a kacha mara amara, ọ bụ ezie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile, bụ onye edemede ukwu France ahụ bụ Jules Verne. Na 1954 onye nduzi Richard Fleischer kpọgara ya na fim na mmepụta nke Walt Disney. Ọ ghọrọ otu ụdị nke ụdị njem ahụ mana na nnukwu ihuenyo.
Akwụkwọ a na-akọ akụkọ banyere onye mbụ site n'aka onye prọfesọ French Pierre aronnax, onye ama ama n’ banyere ihe banyere ihe ndu ya, onye nke ya Onye enyemaka Conseil ma diri ya Onye haroponer Canada Ned Land, ọ na-adọrọ ha n’agha onyeisi nemo, nke ụgbọ okpuru mmiri ya Nautilus na-emehie onye ọ bụla maka anụ mmiri. Njem njem ha n'okpuru oke osimiri, ọgụ ha na ụmụ anụmanụ dị egwu na esemokwu dị n'etiti ndị agwa ịnwa ịgbanahụ ma ọ bụ ghọta ozi ịbọ ọbọ na igbu onwe nke Nemo mebiri emebi mepụtara akụkọ pụrụ iche ma na ibe akwụkwọ ma na okpokolo agba nke ihe nkiri ahụ.
Douglas gụnyere ihe ndị masịrị ya, obi ụtọ na obi ike Ned Land na njirimara a na-agaghị echefu echefu n'ihi ọdịdị na ọdịdị ya. Ikekwe otu n'ime nkọwa ya kachasị dị anya banyere ọrụ ya dị oke njọ nke ụdị siri ike, nke na-edoghị anya, ụdị aghụghọ ma ọ bụ nke ụdị dike nke ọ zụrụ nke ukwuu.
Ikekwe ihe kacha cheta ya ma jikwa ya mma, ọ bụ ezie na ha dị ole na ole. Onye edemede America Howard ngwa ngwa (onye dekwara n'okpuru pseudonym nke EV Onya) Anọ m n'ụlọ mkpọrọ mgbe ọ malitere ide Spartacus. Mgbakwunye na Ndị otu ọchịchị Kọmunist, bụ ndị a ma ama kpọrọ Kọmitii Amụma Amerịka ha tụrụ ya mkpọrọ ọnwa atọ maka nlelị nke Congress.
Akụkọ banyere ọgba aghara nke ndị ohu Rom nke Spartacus duziri Ndị nkwusa dị iche iche jụrụ ya, onye na-anwa anwa bipụta akụkọ dị otú ahụ. Ngwa ngwa kpebiri ibipụta ya n'onwe ya Site na ụlọ mbipụta akwụkwọ nke ya bụ Blue Heron Press na ihe ịtụnanya ya, erere ihe karịrị puku akwụkwọ iri anọ na mkpuchi siri ike. Mgbe njedebe nke oge Senator McCarthy rere ọtụtụ nde mmadụ ma sụgharịa ya Asụsụ iri atọ.
Afọ iri ka ebichara ya Douglas kwenyere Universal gbaa ihe nkiri ahụ dabere na akwụkwọ ahụ wee sie ike itinye ya na nzere Dalton trumbo, bụkwa onye edemede edepụtara edepụtara site na akwụkwọ akụkọ ahụ. Ihe nkiri ahụ duziri ya Stanley Kubrick Ọ bụ ihe ịga nke ọma n'ọfịs meriri Oscars anọ ma họpụta ya maka abụọ ọzọ. Na maka ihe niile ihu na ọnụ ọgụgụ nke Spartacus ga-abụ nke Kirk Douglas.
Akwụkwọ dịka onye edemede
Ide akwụkwọ bụ ndọtị nke ịbụ onye na-eme ihe nkiri. Iji mee fim, ị ga-achọ otu ìgwè; mgbe ị na-ede, ị bụ onye nduzi na ihe odide niile.
Mgbe akụkọ akụkọ ọdịnala mbụ ya gasịrị, a gbara Douglas ume ka ọ gaa n'ihu ide ihe. N'ihi ya, na 1990, ọhaneze Igba egwu na ekwensu, otu akụkọ ifo nke onye protagonist bu a Ndọrọ ndị Juu n’agha onye gara United States, ebe ọ ga-abụ onye nduzi ihe nkiri wee bido ọrụ nke ebumnuche kpebiri. O doro anya na arụmụka ọ maara. Na Ikpeazụ tango na Brooklyn bipụtara ya na 1994, banyere akụkọ ịhụnanya nke di na nwunye na-ezute na nnọkọ nkiri ebe ha na-arụ ọrụ Ikpeazụ tango na Paris.
En 1992 ahụhụ a akwa ụgbọelu okuku na ọ fọrọ nke nta ka ọ tụfuo ndụ ya na ahụmahụ sitere n'ike mmụọ nsọ ya Onyinye. Ọ bụkwa onye mepụtara akwụkwọ nke abụọ ya, Asrịgo ugwu, nke mere ya Deauville Festival Literary Prize na Septemba 1999. O dekwara umuaka umuaka abuo, nke nke ya bu nke ya Ndị na-eto eto dị na Baịbụl. Ma na na 2008 o dere akwụkwọ ọzọ akpọrọ Ka anyị chee ya ihu: afọ 90 nke ndụ, ịhụnanya na mmụta. Ikpeazụ? Anyị ga-ahụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Afọ 101 nke Kirk Douglas. Akwụkwọ ya na ndị edemede ya
Akwụkwọ 7 maka iji asụsụ. Curiosities, mmụta, nyocha ...
Chọpụta nwanyị edemede nke bipụtara n'afọ a mụrụ gị